Amboary ny haavon'ny haavon'ny fampiharana amin'ny App Volume Control | Androidsis
Ny rafitra hifehezana ny habetsaky ny singa samihafa, toy ny fampandrenesana, antso na fanairana, dia tsy izay tadiavintsika rehetra, fa ny marina dia satria nihatsara ny Android 6.0 Marshmallow zavatra amin'ny tsy vao ela Android. Na izany na tsy izany dia mbola mitady ny rafitra tonga lafatra hifehezana ny habetsaky ny fampandrenesana na ny antso isika, na dia miaraka amin'i Marshmallow na Lollipop aza izahay dia manana fiasa tena miavaka, toy ny rehefa ampidinintsika ny aotra ho aotra ka atolotra antsika ny mety hampanginana azy mandritra ny fotoana na amin'ny fotoana voafaritra iray mety hisy mandra-pahatongan'ny fanairana fanairana manaraka.
Na izany aza, manana safidy amin'ny fampiharana sasany izahay Mety ho mora ampiasaina izy io mba hifehezana ny volantsika araka izay tadiavintsika. Ity fampiharana ity dia antsoina hoe App Volume Control ary io dia iray ahafahantsika mifehy tsirairay ny feon'ny feo ho an'ny fampiharana tsirairay. Amin'izany fomba izany no ahafahantsika manana ny avo ho an'ny Gmail fa ny antsasany ho an'ny mpanjifa mailaka isan-karazany ananantsika na ireo fampiharana fandefasan-kafatra izay tsy tiantsika hanelingelina anay amin'ny ora sasany amin'ny andro. Amin'izany fomba izany no hanamarihako ny sasany amin'ireo toetra mampiavaka azy sy ny fomba ahafahana manamboatra azy io mba hahazoana ny tsara indrindra amin'ny Control Volume App izay anananao maimaimpoana, fa miaraka amin'ny dokam-barotra, avy amin'ny Google Play Store.
1 Mitantana ny fifehezana volume
2 Ahoana ny fametrahana ny habetsaky ny fampiharana tsirairay
Mitantana ny fifehezana volume
Volume Control App dia fampiharana vao tsy ela akory izay nohavaozina hanatsarana ny fanohanan'ny Espaniôla, noho izany dia miatrika fotoana manokana izahay ho an'ity rindranasa ity mba ho iray izay mitantana izay rehetra misy ifandraisany amin'ny volan'ny telefaoninao.
Anisan'ireo mampiavaka azy ny fahaizantsika manitsy ny feon'ny mozika, ny feony, ny fanairana, ny fampandrenesana ary ny rafitra ho fototry ny fampiharana, ary inona ny fahaizany manokana manova ny feony rehefa manomboka fampiharana ianao. Ataovy ao an-tsaina izany misy fampandrenesana azo aseho rehefa nisy volavola namboarina.
Alohan'ny handehanana any amin'ny vicissitude ho an'ny fitantanana ny volan'ny tsirairay amin'ireo fampiharana tiana, maimaim-poana ny Volume Control App, na dia misy dikan-Pro izay manala fetra sy doka sasany aza.
Ahoana ny fametrahana ny habetsaky ny fampiharana tsirairay
Rehefa avy nametraka ilay fampiharana izahay, App Volume Control hangataka ny hampiasanay ny serivisy avy amin'ny fikirakirana fidirana Android. Zava-dehibe ity dingana ity mba hiasa tsara ilay rindranasa ary rehefa mandeha any amin'ny fikirakirana fidirana ianao dia hanana ilay fampiharana hampandeha azy ireo.
Rehefa miverina amin'ny app isika ho hitantsika ny lisitry ny fampiharana feno napetrakay ao amin'ny terminal. Ankehitriny dia mila tsindrio fotsiny ilay tianao hamboarina isika. Efa eo amin'ny efijery an'ny rindrambaiko ihany, toy ny Spotify, miditra amin'ny andiana masontsivana izahay handaminana ny haavon'ny haino aman-jery, antso, fanairana, fampandrenesana ary rafitra.
Raha mandefa rindrambaiko mivantana toa an'i Spotify isika dia atolotra amin'ny safidy iray izany mba tsy hanelingelina antsika ary hifantoka amin'ny fotoana fialantsasantsika dia ny hametrahantsika ny feon'ny haino aman-jery amin'ny fahafaha-miasa feno ary ny sisa amin'ny feo ho aotra. Raha toa isika ka efa eo amin'ilay tranga te-handray antso dia afindrao fotsiny ho antsasaky ny feon'ny antso. Eto afaka miaina ianao miaraka amin'ny mombamomba azy manokana ho an'ny fampiharana tsirairay ary mety ho hafa tanteraka ho an'ny tsirairay avy.
Safidy iray hafa mahaliana ihany koa ny fahaizana mamerina ny toe-javatra ankapobeny rehefa mikatona ny fampiharana. Amin'ny tranga Spotify, amin'ny fotoana hanakatonanay azy, ny habetsaky ny masontsivana tsirairay dia hiverina amin'ny toerana misy anao amin'ny telefaona.
App Volume Control dia fampiharana izay mifantoka manokana amin'ny fitantanana fanaraha-maso ny boky ho an'ny fampiharana tsirairay tsy misy mihoatra an'ity. Ary tadidio fa raha te hiditra amin'ireo asany feno ianao dia aza mangataka fotoana maharitra hahazoana ilay kinova pro ho an'ny 0,99 €.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fanitsiana ny haavon'ny haavon'ny isaky ny fampiharana amin'ny Android
Ardjlon dia hoy izy:
Andao andramo izany, ho hitantsika ny fomba, efa nitady zavatra toa an'ity fampiharana ity efa ela aho.
Valiny tamin'i Ardjlon
Efa nilaza taminay ianao hoe nanao ahoana ny traikefan'ny mpampiasa 🙂 Miarahaba anao!